Video:-Wiilka Sodoga uu u yahay Trump oo beeniyay in uu xiriir la leeyahay Ruushka – Idil News
Video:-Wiilka Sodoga uu u yahay Trump oo beeniyay in uu xiriir la leeyahay Ruushka
Hadalka oo guddiyada labada aqal uu ugu tala galay ayuu ku yiri “ma aanan maleegin, mana garanayo qof ololaha ka mid ah oo wax la maleegay dawlad shisheeye”.
“Marka laga hadlayo xiriirradayda Ruushka ama wakiillada Ruushka intii uu ololuhu socday, aad bay u adag tahay in wax laga dhex helo” ayuu yiri.
Dhamaadka hadalkiisa qoraalka ah ayuu ku yiri “laga yaabee afar xiriir oo wakiillo Ruush ah” intii uu ololuhu socday iyo ka dib labadaba.
Trump iyo Putin oo la ogaaday in ay kulan qarsoodi ah yeesheen Mr Kushner wuxuu sheegay inuu kulanka goor dambe yimid, isagoo xaqiiqsaday in wax aan badnayn laga wada hadlay oo aan “wakhti badan la wada qaadan”.
Donald Trump Jr ayaa sheegay in ninkii ololaha madaxda ka ahaa, Paul Manafort, uu sidoo kale kulanka joogay, isla markaana macluumaad wax u dhimaya Mrs Clinton aan halkaa lagu soo bandhigin.